ring piston - China Wenzhou Dongyi Machinery
Tribologically izinto ezaba Gas-tight zokwakha malunga neegesi ezisezantsi-ezinto-ubunzima amakhonkco piston ukuwatywina igesi egumbini ucinezelo of compressors Buyisela. Bona wena, ngokwemiqathango kuyilo kunye eziphathekayo, kwiimeko isicelo ezahlukeneyo izicokisi, kushishino irhasi yendalo, kwakunye petrochemical nemichiza mveliso. Izangqa ngqo wenza zivumele operation oluthembekileyo kunye ubomi ngenkonzo ende kwimveliso emoyeni mveliso kunye neendawo ezininzi ...
Izinto Tribologically kusiza
zokwakha Gas-nzima neegesi ezisezantsi-ezinto-ubunzima
amakhonkco piston uphawu irhasi egumbini ucinezelo of compressors Buyisela. Bona wena, ngokwemiqathango kuyilo kunye eziphathekayo, kwiimeko isicelo ezahlukeneyo izicokisi, kushishino irhasi yendalo, kwakunye petrochemical nemichiza mveliso. Izangqa ngqo wenza zivumele operation oluthembekileyo kunye ubomi ngenkonzo ende kwimveliso emoyeni mveliso kunye neendawo ezininzi yenkqubo zobunjineli.
amakhonkco piston, nemisesane rider kunye bands enziwa kwezoyilo ezahlukeneyo:
Omnye piece-okanye segmental ngqo
ezimbini Icandelo lokunika
yoyilo nemisesane, liqulunqe imixube ezithile kwizicelo ingakumbi yingxaki kwaye unzima. Oku kuquka ngokuguqulwa ezininzi ngempumelelo ukusuka lubricated ukuya operation.Pressure non-lubricated amakhonkco elungeleleneyo ziyafumaneka, xa kubonwa kufanelekile ukuba izicelo uxinzelelo oluphezulu kunye piston / nomkhweli iindibaniso ze ring ziyafumaneka ukulungiselela izicelo ezininzi ezithile nayo.
amakhonkco ububanzi piston ezinkulu ukuya ku 47 "(1200mm) ziya siko ezenziweyo ukulungiselela iimfuno ezizodwa. Ulungiso ngendlela piston nomkhweli amakhonkco ebuntsimbi nayo eyenziweyo, esebenzisa amabanga ezikhethiweyo yobhedu okanye intsimbi ekutyhidweni, apho zinyanzelisa iimfuno zomsebenzi.
Previous: piston & intonga
Okulandelayo: ebizwa iqokobhe
3921919 piston Imisesane
6ct Injini Assembly piston
Deutz Injini Assembly piston
Injini Izahlulo piston Assembly injini
Isle Injini piston
Piston And Assembly Pin
Piston isiguquli Valve
Buyisela piston isiguquli Valve
Volvo Injini piston Td71
Wd615 Injini piston Vg1560037011
piston & intonga